नो पार्किङ क्षेत्रमा यूएनको गाडीमा ट्राफिक प्रहरीको ‘ह्विल लक’! | अपन जनकपुर
नो पार्किङ क्षेत्रमा यूएनको गाडीमा ट्राफिक प्रहरीको ‘ह्विल लक’!
जनकपुरधाम,२९ मंसिर : नो पार्किङ क्षेत्रमा पार्किङ गरेर राखेपछि संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन) को गाडीलाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरेको छ।
जनकपुरको भानुचोकस्थित नो पार्किङ क्षेत्र सडकमा राखिएको युएनको ६६–१–१३२१ नम्बरको गाडीलाई ट्राफिकले कारबाही गरेको हो। चालकले जरिबाना नतिरेपछि उनीसँग भएको चालक अनुमति पत्र ट्राफिकले नियन्त्रणमा लिएको छ। नो पाकिङ क्षेत्रमा गाडी राखेको देखेपछि ट्राफिक प्रहरी सहायक निरीक्षक केदारप्रसाद पौडेलले ‘ह्वील लक’ लगाए।
केहीबेर पछि चालक आएपछि जरिबाना तिर्न आनाकानी गरे। त्यसपछि प्रहरी सहायक निरीक्षक दाहालले उनीसँग भएको चालक अनुमतिपत्र नियन्त्रणमा लिएका थिए। उनले कानुनभन्दा माथि कोही नहुने गरेकाले युएनको गाडीलाई पनि कारबाही गरिएको बताए। उनले भने, ‘चालकको लाइसेन्स नियन्त्रणमा छ। उनी लाइसेन्स लिन आएपछि जरिबाना तिराइने छ।’